American, Mmụọ, ụgbọ elu Southwest: Gịnị mere Bailout Billion 79?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » American, Mmụọ, ụgbọ elu Southwest: Gịnị mere Bailout Billion 79?
Airlines • Akụkọ mkpakọrịta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị ụgbọ elu nọ na United States natara ihe karịrị ijeri $ 79 na ego mgbapụta gafee ụgwọ atọ metụtara COVID na 2020-2021 iji nyere ha aka, ndị ọrụ ha, na ụlọ ọrụ njem ụgbọ elu lanarị ajọ ọrịa COVID. Ndị Congress zubere ego a ka ọ gakwuru ndị ọkwọ ụgbọ elu, ndị na -eje ozi ụgbọ elu, na ndị ọrụ ụgbọ elu na ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu iji hụ na a kwụrụ ha ụgwọ n'oge oke nkụda mmụọ na iji hụ na ndị na -anya ụgbọ elu ga -enwe ike igbo mkpa njem dị elu ozugbo Covid. ọnọdụ ka mma.
FlyersRights, otu ndị na -ahụ maka ịgbachitere ndị ahịa akpọọla oku maka nnọkọ nlekọta na ndị isi ụgbọ elu yana ndị nnọchi anya ndị ọrụ na ndị njem.
Enyere ndị ụgbọ elu nnukwu enyemaka gọọmentị etiti iji mee ka ọrụ ikuku ọha siri ike ma belata ọrịa COVID.
Nkagbu dị elu n'oge na -adịbeghị anya, igbu oge ụgbọ elu, yana mmegide ụgbọ elu na ụfọdụ ntuziaka CDC dị mkpa na -agbagha ma njikwa ụgbọ elu ejirila ego onye na -akwụ ụtụ.
"American Airlines, Spirit Airlines, na Southwest Airlines, dara ndị America kpamkpam"
Onye isi oche FlyersRights.org Paul Hudson
Nkagbu ụgbọ elu dị ukwuu
N'ime oge ọkọchị, ndị na -anya ụgbọ elu akagbuola ọtụtụ narị ụgbọ elu kwa ụbọchị n'ihi na ha enweghị ndị ọrụ zuru ezu ịga. N'ụbọchị ya kacha njọ, ụgbọ elu ụgbọ elu kagburu ihe karịrị ọkara ụgbọ elu ya.
Nke a bụ ihe anabataghị, Senator Maria Cantwell, onye isi oche na Kọmitii Azụmaahịa Sineti, zigara ndị ụgbọ elu akwụkwọ ozi maka okwu a na July. FlyersRights.org ya na ndị ọrụ ya zukọrọ ka ha kparịta ụka na Septemba 1st na ịtụpụta ihe ngwọta maka mmetọ ụgbọ elu kacha ọhụrụ.
Ntị nke Kọmitii Nlekọta Ụlọ rịọrọ
FlyersRights.org rịọrọ ka ndị na -ahụ maka kọmitii na -ahụ maka ịmanye Doug Parker, Gary Kelly, Ted Christie, na ndị isi ụgbọ elu ndị ọzọ ka ha kọwaa ihe ha ji ego enyemaka COVID na ihe kpatara na ndị ụgbọ elu ha emezughị iwepụta ihe iwu chọrọ.
Mkpesa nleba anya kwesịrị ịgụnye ndị nnọchi anya ndị njem na ndị nnọchi anya ndị ọrụ. FlyersRights.org tụpụtara atụmatụ mkpali na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke ga -eme ka ndị na -anya ụgbọ elu na -aba uru, na -arụ ọrụ na ikike dị elu n'oge ọrịa, wee hụ na njem ụgbọ elu adịghị mma, niile dị ọnụ ala karịa ngwugwu mgbapụta.
FlyersRights.org bụ ọgbakọ ndị njem ụgbọelu kacha ibu; ọ na -akwado ndị njem ụgbọ elu n'ihu FAA, DOT, TSA na ụlọ ọrụ gọọmentị ndị ọzọ